JUNE&MAY: November 2015
အက်ဝင် P1 စတက်တော့ သင်္ချာ ကျူရှင်မထားပါဘူး။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကလေးကို ကျူရှင်အတွက် အချိန် မကုန်စေချင်တာရယ် P1 သင်္ချာလောက်တော့ ကိုယ်လဲ သင်နိုင်တ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။တကယ့် တစ်ကယ် သင်ကြည့်တော့ ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။သင်္ချာ အပေါင်း အနုတ် အမြှောက် အစားများဘာကွာလို့လဲ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ကွာပါတယ် သင်ပုံသင်နည်း။K2 မှာသူတို့ ကျောင်းက သင်တာနဲံ အပြင်ကနေစာအုပ်ဝယ် ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ အပေါင်းဆို count more/add more လို့သင်ပြီး အနုတ်ကို count back/take away လို့သင်တယ်။ဥပမာပေါ ၅-၂ ဆို ၅ အထိရေး ပြီးမှ အနောက်ကို ၂ ခုပြန်ဆုတ် အဖြေက ၃ (ဒါမှမဟုတ်) အနုတ်ခံရမယ့် ၂ ကို လက်၂ချောင်းထောင်ထား ပြီးရင် နုတ်မယ့် ၅ ကနေ အနောက်ကို ပြန်ရွတ် ၅ပြီးတော့ ၄ ဆိုပြီး လက်တစ်ချောင်းကို ချိုးလိုက် နောက် ၄ပြီးတော့ ၃ ဆိုပြီး ဒုတိယလက်တစ်ချောင်းကို ချိုးလိုက် အဖြေက ၃ ဖြစ်ရော။မြန်မာလို(မြန်မာပြည်မှာ ငယ်ငယ်ကသင်သလိုဆို)လက်ငါးချောင်းထောင် ၂ ချောင်းနုတ် ၃ ချောင်းကျန် အဖြေက ၃ ဒါပဲ။အပေါ်က စလုံးနည်းနဲ့ နုတ်တဲ့အက်ဝင်ဟာ ကျောင်းကအနုတ်သင်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းစာရွက် လေးတွေမှာအမှားလေးတွေ ပါလာတာတွေ့၇တော့ သူဘာ့ကြောင့်လွယ်လွယ်လေးတွေ မှားလာလဲ စဉ်းစားလို့မရဘူး။သူတို့ ကျောင်းက လုံးဝ အိမ်စာမပေးဘူး ကျောင်းမှာ အပြီး အိမ်ရောက်ရင် လုံးဝ ဖရီးပဲ။
နောက်ပြီး အက်ဝင်ဟာ အနည်းအများ ကောင်းကောင်းမသိဘူး။ဥပမာ သူ့မှာ မုန့်၅ ခုရှိတယ် လင်းလင်းမှာ ၆ ခု၇ှိတယ် ဘယ်သူပိုများလဲဆို သူ ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ သင်္ချာဟာ စိုးရိမ်အမှတ်ရောက်နေပြီ လို့ အမေလုပ်သူက သတ်မှတ်ပြီး ငြီးတော့ အဖေလုပ်သူက ဘာမှ သချာင်္ညဏ် မရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်တဲ့သူ မဟုတ်လို့တဲ့။သင်္ချာဆိုတာ အခြေခံပိုင်ရင်ဘယ်လိုလိုလာလာတဲ့ကိုယ်သင်တဲ့အချိန်သူကအနားမှာ၇ှိတော့ကိုယ်သင်တဲ့စလုံးနည်းကိုသူသဘောမကျဘူး။မြန်မာနည်းပဲသင်သင့်တယ်ထင်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ ဒါဆိုဒယ်ဒီပဲ သင်တော့ဆိုပြီး လွဲပေးလိုက်တယ်။လွှဲမပေးခင်နှစ်ဝက် မိဘဆရာ တွေ့ပွဲမှာ အက်သင့် form teacher က အက်ဝင် အနုတ် နုတ်တာ တစ်မျိုးပဲ သူသင်တာ နဲ့ မတူဘူးတဲ့။အက်ဝင် တီချယ့်ကို ၅-၂(ဥပမာ) လုပ်ပြဆိုတော့ ကိုယ်တော်ကအနုတ်ခံရမယ့် ၂ ကို လက်၂ချောင်းထောင်ထား ပြီး နုတ်မယ့် ၅ ကနေ အနောက်ကို ပြန်ရွတ် ၅ပြီးတော့ ၄ ဆိုပြီး လက်တစ်ချောင်းကို ချိုးလိုက် နောက် ၄ပြီးတော့ ၃ ဆိုပြီး ဒုတိယလက်တစ်ချောင်းကို ချိုးလိုက်တော့ အဖြေက ၃ ဖြစ်ရော။ ဆရာမ တွေ့လား တီချယ်တို့က ၅-၂ ဆို နုတ်မယ့် ၂ကို ခေါင်းထဲမှတ် ပြီး ၂ပြီးတော့ ၃,၄,၅ ပြီး ၅ထိရောက်အောင် ရေသွားပြီး လက်ချောင်းလေးလိုက်ထောင်လိုက် ဟောအဖြေက ၃ တဲ့။အဲ့မှာသဘောပေါက်လိုက်တယ် အက်ဝင်မှတ်ထားတာနဲ့ကျောင်းနဲ့လွဲနေပြီ။
သူ့အဖေစသင်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းကစာအုပ်တွေကို လေ့လာတယ်။လေ့လာပြီးတဲ့အခါ သူသဘောပေါက်သွားတယ် မြန်မာပြည်ကကိုယ်သင်ဖူးတာနဲ့ တွက်ပုံချင်းကွာတယ်ဆိုတာ။အနုတ်မျာတင် ၂မျိုးလောက်၇ှိတာ။regroupingလုပ်ရမယ်ဆိုတာက၇ှိသေး။
အဖေလုပ်သူကလေ့လာတယ်။ကြိုးစားသင်ပါတယ်။သားဖြစ်သူကယက်ကန်ယက်ကန်ပဲ။ညဘက်ရောက်ပြီအလုပ်ကပြန်လာလို့ထမင်းစားပြီးပြီဆိုသားလုပ်သူကဒယ်ဒီသင်္ချာသင်မယ်လေဆိုအဖေလုပ်သူက နေပါအုံးကွာဒယ်ဒီအရင်လေ့လာပါရစေအုံးဆိုပြီး ၂ ပတ်မြောက်မှာတော့ ကျူရျင်ပဲ ထားလိုက်ပါကွာ သူတို့သင်တာနဲ့ ကိုယ်တို့သင်ခဲ့တာ တူမှမတူပဲဆိုပြီးရပ်လိုက်တော့ ကိုယ်တော် အက်ဝင်တစ်ယောက် သူ့ဘာသာ စခန်းသွားရော။
အမေလုပ်သူကတော့ ညနေ အလုပ်ကပြန်လာရင် လွယ်အိတ်စစ် လက်မှတ်ထိုးစရာပါရင်ထိုးရတော့ သူ့သင်္ချာ worksheetလေးတွေပေါ် အမှားတွေ့တိုင်းဘာလို့မှားလဲ စပ်စုရတာပေါ့။အဲ့အခါကျရင် သားတို့ကျောင်းမှာဆရာမကဒါကို ဘယ်လို သင်သလဲအရင်မေးရတယ်။အရင်စနည်းနာ၇တယ်။အမှန်တော့ သူမှားလာရင် လွယ်တာတွေမှားလာတာများတယ်။လျှမ်းတဲ့သဘော။
တစ်ခါ checkpoint ဖြေလာတာ သုံးလုံးဆင့် ပေါင်းတာ ဥပမာ ၅+၉+၁၀ လိုမျိုးကိုေ၇ှ့မျာ ၂ပုဒ်ပေါင်းအကုန်မှန် နောက်ဆုံး စာနဲ့မေးတဲ့ work problem ၂ပုဒ်မှာ နောက်ဆုံး၁ပုဒ်မှာ၂ခုပဲပေါင်းလာလို့ မှားလာခဲ့တယ်။ပေါင်းဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တာလေ။အိမ်မှာ သင်္ချာသင်တဲ့ သင်တဲ့ကိုယ်တွေကပဲ ပုံစံမကျလို့လားမသိကိုယ်က၇ှင်းလေ သူက နားမလည်လေ ပိုမှားလေပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ လွှတ်ပေးထားလိုက်တယ်။အင်း သင်္ချာတော့ ဒီကောင် အခြေနေဆိုးမှာပဲလို့တွက်ထားတာ 94 နဲ့ grade 1 ၇တော့ အတော်အံ့သြသွားတယ်။
ရှေ့နှစ် P2 ကိုဘယ်မှာ ကျူရှင် ထားရမလဲ မသိသေးဘူးကိုယ်တော့ သင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။
Posted by JuneOne at 2:11 AM4comments Links to this post
မာမီ မေလင်း နှာခေါင်း နဲနဲ နံသလိုပဲ ဒါပေမယ့် နှာခေါင်းထဲ ဘာမှ ထည့်ဘူးနော်တဲ့.
ဒေါက်တာ တန်ဆီ သွားစရာမလိုဘူး တဲ့.သူ သိပ်ကြောက်သွားပြီလေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လလောက်တုန်း က သူ့ ညာဖက်နှာခေါင်းက အပုပ်နံ့
ထွက်လိုမျိုး ထွက်တော့ အထဲ ကိုကြည့်တော့အထဲမှာအသီးလိုမျိုးတွေ့တယ်။
သူကကြည့်ရင်အကြည့်မခံဘူး။လှပ်တပျက်ပဲ ကြည့်ရတာ။ သူကလဲ နာတယ်
မပြော အမေကလဲအလုပ်ရှုပ် ဆိုတော့ ၁လ လောက်ကြာတော့
သူက မာမီ နှာခေါင်းက နာသလိုပဲ ဆိုတော့ အတင်းဖြဲကြည့်တော့
အထဲမှာ အသီးလို ဟာက ပိုကြီး လာသလို ထင်ရတယ်။
ကဲလင်းလင်း ရေ မာမီတို့တော့ ဆေါ်ခန်းသွားမှ ပဲ ဆိုပြီး ခရီးသွားနေတဲ့ သူ့အဖေကို အကြောင်းကြား
ကိုယ် ပါးစပ်တွေ အနာဖြစ်တုန်းက အော့ချက် paragon က ENT အထူးကု ဆေးခန်း ကိုပြေးတယ်။
ဆေးရုံ မသွားပဲ ဘာလို့ အဲ့သွားလဲဆိုတော့ အဲ့ဆေးခန်းက အင်ရှုးယန့် ဘယ်လို ကလိန်းလို့ ရတယ်။
ကလိန်းလို့ လဲ အဆင်ပြေလို့။မေလင်း က အဲ့တုန်းက ရိုးရိုး hospitalization plan (premium plan)
ပဲဝယ်ထားပေမယ့်။scope တို့ CT scan တို့ ဆို ဆေးရုံ မတက် ရလဲ အကြုံးဝင်တယ်လေ။ကိုယ့်တုန်းက
ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ့။ဆေးခန်းရောက် ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြ။
ဆရာက သေချာနားထောင်။ပြောပြ ရအုံးမယ် ဒီက အထူးကုတွေ သိပ်ဖော်ရွှေ တာ။လူနာ နာမည်ခေါ်
တာက အစ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ။လာပြတာ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေ ချည်းပဲ။
ကိုယ် follow up ပြနေတဲ့ ဆရာမ ဆို တစ်ခါ consultant fee က စလုံး ၁၀၀ ပဲ။ကိုယ်ခံစားရသမျ
အေးဆေးပြော လက်မှာ ကြွက်နို့တွေ ပွားလာ တာက အစပြောပြ အကြံတောင်းတော့ ဘယ်မှာ
ဘယ်လို ဆေးဝယ် ဆေးဘူးက ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လို လိမ်းရမယ်ဆိုတာ စာရွက်ပေါ် မှာတောင် ပုံဆွဲ
ဟိုတောလောက CNA မှာ ကိုယ်ပြဖူးတဲ့ infection doctor ကို
interview တောင်တွေ့လိုက်သေး အိမ်ကလူ အတင်းခေါ်ပြလို့။
အဲ့ ဆရာဆို အခု ကိုယ်ပြနေတဲ့ဆရာမ ဆီ လွှဲပေးတုန်းက
အင်ရှုးယန့် ကိုယ့်အတွက် မကလိန်းပေးလို့ ဆို ပြီး ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပေး။
ကိုယ့်ရောဂါ ဘာလဲ ဆိုတာ သေချာ နားလည်အောင်မြန်မာဆရာဝန်
တစ်ယောက်ကို ဖုံးခေါ်ပြီး ရှင်းခိုင်းသေးတာ။အဲ့ဒါလဲ ပြခ ၁၀၀ ပဲ။
စောနက ဟာကို ပြန်ဆက်ရရင် ဆရာဝန်က ခုံပေါ်ကို အမေလုပ်တဲ့သူကို ထိုင် မေလင်းကို
အမေ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီး နှာခေါင်းထဲကြည့်တော့ သေချာတာပေါ့ နှာခေါင်းထဲ
တစ်ခုခု ထည့်ထားတာ။ကြည့်ပြီးတော့ဆရာက သူငြိမ်ငြိမ်နေလို့ အခုဒီမှာပဲ ထုတ်ရင် သိပ်မကုန်ဘူး။
မေ့ဆေးနဲ့ ဆေးရုံမှာ ထုတ်ရမယ်ဆို ၆၀၀၀ လောက်ကုန်မယ်တဲ့။
ထုတ်ကြည့် မယ်ဆိုပြီး သူ့ခေါင်းကို အမေလုပ်သူက ကိုင်ထားပြီး ဆရာက scope နဲ့ ကြည့်ပြီး
ညှပ်နဲ့ ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ကြယ်သီး ကြီး ဖြစ်နေတာ အောက်မှာ ဆေးခန်းက
အလကားပေးလိုက်တဲ့ scope ကနေ record လုပ်ထားတဲ့ video မှာ ကြည့်ကြည့်။
ဆွဲ တုတ်ပုံ ဆရာ record လုပ်ထားတာ ပေးလိုက်တာ
ရှင်းတော့ ၈၁၀ ကျတယ်။အင်ရှုးယန့်ပြန်ကလိန်းတော့ ၁၀ ရက်ပဲ ကြာတယ်။အကုန်ပြန်ရတယ်။
အခုတော့ လင်းလင်း တစ်ယောက် မှတ်သွားပြီ။သူက သူဘယ်တုန်းကမှမထည့်ပါဘူး။လုပ်သေးတယ်။
ဘယ်အချိန်များ ထည့်လိုက်ပြီး အသက်ရှု နိုင်နေသေးတာ ကံကောင်းလို့ပေါ့။
Posted by JuneOne at 10:23 PM2comments Links to this post
Posted by JuneOne at 10:21 PM 1 comments Links to this post
အိမ်မှာ အက်ဝင်တို့က library ကနေ စာအုပ်တွေ ငှားတယ်။မေလင်းကတော CD ငှားတယ်။
ပုံမှန်ဆို Member တစ်ကဒ် ဆို CD အပါအ၀င် ၈ အုပ် ငှားလို့ရတယ်။school holiday ဆို
တစ်ခါငှား စာအုပ်က ၁၂ အုပ် CD က ၈ ခွေ(ကိုယ့်ကဒ်ကို...အက်ဝင့်ကဒ်ကတော့ အဲ့လောက်မရ) ပေးငှားတယ်။အဲ့တော့ ငှားလိုက်ပြန်အပ်လိုက်ပေါ့။ငှား စာအုပ်ငှားတဲ့ စက်မှာ စာအုပ်လေးတွေတင် ကိုယ့် ကဒ်လေးစကင်ဖတ် ပြီးရင်စက်ကနေ စာအုပ် ဘယ်နှစ်အုပ်
CD ဘယ်နှစ်ခွေ နာမည် တွေနဲ့ list ထွက်လာ။reference အနေ နဲ့ အဲ့ဒါလေး သိမ်းရင်သိမ်း မသိမ်းချင်ရင်လဲ ငှားပြီးတာနဲ့ library ကနေ ပို့ပေးတဲ့email ကို ပြန်အပ်ခါနီးဆို ကြည့်ပြီး CD ကတော့ ဘယ်နှစ်ခွေ စာအုပ်ကတော့ ဘယ်နှစ်အုပ်ဆိုပြီး စစ်ပြီးထည့် ပြီးရင် Libraryအရှေ့က Book Drop ကနေ စာအုပ်တွေကို ပစ်ချပြီး စာအုပ်တွေကို return လုပ်တယ်။
ပုံမှန် အဲ့လို return လုပ်ပြီး Library ထဲ ၀င် စာဖတ် ငှားမယ့်စာအုပ် ရွေး ဘာညာနဲ့
တစ်နာရီလောက်ဆို ကိုယ်ံရဲ့ မန်ဘာကဒ်ထဲက Borrow လုပ်ထားတဲံ list ဟာ clear ဖြစ်သွားပြီး အသစ်ပြန်ငှားလို့ရပြီ။အသစ်ပြန် မငှား ခင် အမြဲ စစ်တယ် အကုန် clear ဖြစ်လားလို့။တစ်ရက်တော့ ကဲစာအုပ် သွားအပ်မယ်ဟေ့ ဆိုပြီး စာအုပ်တွေစစ် စီဒီတွေ စစ် ပြီး အိတ်ထဲကို ထည့်တယ်
အက်ဝင်တို့ကို ထိန်းတဲ့မမ ကလဲ ကူစစ်နေကြ။အားလုံးစစ် ပြီး အိတ်ကို အိမ်ရှေ့က ခုံပေါ် တင်ထား။ထွက်ခါ နီးတော့ ဆွဲထွက်။Library ရောက် စာအုပ်ကို drop လုပ် အထဲဝင် စာအုပ်ရွေး ဖတ်လုပ်တာ ၁ နာ၇ီ ခွဲလောက်ကြာ။
စာအုပ်ငှားဖို့ စက်ရှေ့ရောက်တော့ ငှားလို့ရတဲ့ စာအုပ်နဲ့ စီဒီ အရေတွက်မှာ စီဒီ ၁ ခွေ လျော့နေတော့။
ဟင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလိမ့်ဆိုပြီး သွားစစ်တော့ My little pony ဆိုတဲ့ CD က clear မဖြစ်သေးဘူး။
အက်ဝင်တို့ မမ ကို လှည်ပြီး ဟေ့ ငါတို့ ထည့်လာ အဲ့ အခွေပါတယ်နော် ငါသေချာ အခွေ အထဲမှာ
CD ပါမပါ တောင် စစ်ထားသေးတာ ဆိုတော့ သူက ဟုတ်တယ်အမ ညီမ စစ်တာလဲ ပါတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ကောင်တာ ဆီ ချီတက်ပြီး ကောင်တာက ၀န်ထမ်းကို ငါတို့ book drop ကနေ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နာရီလောက်က Drop လုပ်ထားတာ ဒီအခွေ တစ်ခွေ clear မဖြစ်သေးဘူး။ဘာလို့လဲပေါ့။
ကောင်တာက မိန်းမက နင် Return လုပ်ရင် Clear ဖြစ်မှာပေါ့ မလုပ်လို့ပေါ့တဲ့။
ကိုယ်ကလဲ ငါ သေချာထည့်လာပါတယ်။စာအုပ်တွေ Drop လုပ်တော့ ကလေး ၂ယောက် အပြိုင်အဆိုင်ထည့်တာဆိုတော့ သတိမထား မိဘူး။ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ မထွက်ခင်ထည့်လာတာတော့ အသေချာပဲ။ကိုယ်က dropလုပ်တယ်ပြောတော့ သူက သူအထဲ ၀င်ကြည့်ပေးမယ်ပြောပြီး
book drop အခန်းထဲ ၀င်ရှာတယ် အထဲမှာ လုပ်နေတဲံ ၀န်ထမ်းတွေကို မေးတော့ မရှိဘူးတဲ့.
သူတို့လဲ မတွေ့ ဘူးတဲ့။ကိုယ်ကလဲ အပြင်းအထန်ထည့်ပါတယ် လုပ်ပြီး နောက်ထပ်ပြီး ငြင်းတော့ သူက အေး ငါ ထပ်ပြီး ကြည့်ပေးမယ်။မရှိတာသေချာရင်တော့ နင်တို့ ပျောက်တာပဲ ဆိုပြီး ထပ်ဝင်ရှာပြီး ထွက်လာတော့ အဲ့ my little pony အခွေကြီးကိုင်လို့ နင်တို့ အခွေက အခုလေးတင်မှ drop ကျလာတာတဲ့။တို့ကလဲ ဟယ်မဖြစ်နိုင်တာ ငါတို့ထည့်ထားတာ ကြာပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
အဲံအချိန်မှာာအကိဝင်တို့မမ က တို့နားမှာ ကလေး ၂ယောက်က သိပ်မဝေးတဲံ နားက စာအုပ်စင်မှာ။
အဲ့ဝန်ထမ်းမိန်းမက ငါ နင့် ဒီအခွေကို clear လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ငါကွဘာရမလဲ ဆိုပြီး ပြန်လာတာ အိမ်ရောက် တံခါးဖွင့်ဝင်တော့ အိမ်ရှေ့က စောစောက အိတ်တင်တဲ့ ခုံပေါ်မှာ အဲ့အခွေကြီး က မိန့်မိန့်ကြီး ဟယ် မမရေ(အက်ဝင်တို့ကလေးထိန်း) ငါတို့အခွေက ဒီမှာကျန်ခဲ့တာတော့ထည့်ပြီးမှ မေလင်းလင်းပြန်ထုတ်ကြည့်ပြီး ပြန်မထည့်ပဲ ထားခဲ့တာနေမှာ ဆိုပြီး တအံ့တသြပြော။ဟယ် ဒါဆို ငါတို့ငြင်းနေတုန်း လာထည့်တဲ့ အခွေက သူများငှားတဲ့ အခွေတူဖြစ်မှာ ပြသနာပဲမြန်မြန် သွားပြန်ထည့်မှ ဆိုပြီး နောက်တစ်ခေါက် သွားထည့်ရတယ်။
အံ့သြမှု ၁- တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငြင်းနေတုန်ါ် title တူ အခွေလာထည့်(အတော်တိုက်ဆိုင်တာ)
အံ့သြမှု ၂-အခွေတူ title တူတွေမှာ serial no တွေ ခွဲမထားဘူးလား။
ရရှိသော သင်ခန်းစာ >>>>၂ ခါ စစ်ပြီး မှ complain လုပ်ပါ။
Posted by JuneOne at 10:00 PM0comments Links to this post